ကလေးများနှင့် Porn: ဒါဟာသင့်ရဲ့ခမည်းတော်၏ '' Playboy '(2010) သည်မဟုတ် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ကလေးများသည်ယနေ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အခြားပြဿနာများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါစူပါလှုံ့ဆော် porn မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်အကန့်အသတ်မရှိအခမဲ့၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသော၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဗွီဒီယိုများသည်မြန်ဆန်သောဆက်သွယ်မှုများရှိသည့်ကျွမ်းကျင်သောအင်တာနက်အသုံးပြုသူများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်သည်။ အို၊ ကမ္ဘာဂြိုလ်၏အရည်အချင်းအရှိဆုံးကွန်ပျူတာဉာဏ်ပညာအချို့သည်လူငယ်များဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလှည့်ပတ်သွားခြင်းသည်လူကြိုက်များသောလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုသို့သောဗီဒီယိုများမကြာခဏသူတို့တောင်မှအများဆုံး freethinking မိဘများအံ့အားသငျ့နိုင်အောင်အစွန်းရောက်ဖြစ်ကြသည်။ စိတ်ရောဂါ-Norman Doidge အတွက်အဆိုအရ ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်ယနေ့ porn အသုံးပြုသူများသည်ကြည့်ရှုသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်အလေ့အကျင့်လေ့ရှိသောကြောင့်၊ ဆိုလိုသည်မှာယနေ့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ရုပ်ပုံများသည်ပိုမိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေမည့်အစား ဦး နှောက်၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်တုံ့ပြန်မှုကိုထုံထိုင်းစေသည်။ ထိုအခါအသုံးပြုသူသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုထိတ်လန့်စေသည့်အရာသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှအဆက်မပြတ်ထုတ်လွှင့်သောအရာတစ်ခုကိုလိုအပ်သည်။ “ Grand Theft Auto” or“ Halo 3” ကစားနေစဉ်“ PacMan” ကဘယ်သူ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှာလဲ။
ဗွီဒီယိုသည်ပိုမိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်၊ အပြစ်ပြုတတ်သော၊ တားမြစ်ထားသော (သို့) စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည့်ဗီဒီယိုဖြစ်လေလေ၊ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကြည့်ရှုသူ၏ ဦး နှောက်ကိုပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည် (အထူးသဖြင့်ဆုလာဘ်တိုက်နယ်) ။ ထို့နောက်အထွတ်အထိပ် က "တန်ဖိုး" ကိုအားဖြည့် အထွတ်အထိပ်ထုတ်လုပ်သောပစ္စည်း၏။ ဒါကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ ဦး နှောက်က ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ခတ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတန်ဖိုးထားဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေတာပါ။ သူတို့အတွက် (သို့မဟုတ်မည်သူမဆိုရဲ့အတွေ့အကြုံအများစု) ကဘာမှမပြင်ဆင်ပေးခဲ့ဘူး။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ပုံများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ထုတ်လွှတ်ပေးသည့် Norepinephine ကိုလည်းတွေ့ရသည် ဒီသင်ယူမှုအားဖြည့်.
ဗီဒီယိုဂိမ်းများက ဦး နှောက်ကို dopamine ဖြင့်ကူးစက်စေသော်လည်းလိင်အကြောင်းအရာသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်၏နောက်ထပ်ရှုထောင့်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်မှာထင်ရှားသည်။ ကလေးများရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးပွားခြင်းအချက်အလက်များကဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။
ထပ်ခါတလဲလဲဆွနောက်မှ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများအံ့သြဖွယ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ လူငယ်များကသူတို့၏လိင်အရသာများသည်တစ်ခါတစ်ရံမမျှော်လင့်သောလမ်းကြောင်းများသို့ပြောင်းလဲသွားခြင်းနှင့်သာမာန်ပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်းအားတုန့်ပြန်မှုနည်းလာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သေချာသည်မှာသူတို့၏ ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်ရည်းစားဖြစ်သူအားပုံမှန်အားဖြင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဆယ်ကျော်သက်များကိုပြုလုပ်စေလိုသည်။ အခြားအပိုင်းတစ်ခုမှာမူကြယ်ပွင့်များ၏ညည်းတွားမြည်တမ်းမှုကိုအလိုရှိသည်။ သူတို့၏ ဦး နှောက်သည်လျင်မြန်သောကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ငါသည်လူနဲ့တူမိုးသည်းထန်စွာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရောဂါလက္ခဏာအကြားရှာဖွေတွေ့ရှိနေသောဆက်စပ်မှုမျှဝေစတင်ကတည်းက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု နှင့် လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ဒီလိုလက္ခဏာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့လူငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေဆီကကျွန်တော်ကြားရတယ်။ (အစွန်းရောက်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ရှားရန်စီမံခန့်ခွဲသောအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံရန်မထင်ထားပါ။ ) ဤတွင်နမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါပြန်ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်တယ်။ ငါရူးသွပ်သွားပြီးငါ့ရဲ့လိင်ဘဝပြီးပြီ။ ငါ ၁၅ နှစ်ရှိပြီ၊ ငါ ၁၂ နှစ်ကတည်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးလုပ်နေတယ်။ အဲဒါကရိုးရိုးလေးဗီဒီယိုတွေပဲထွက်လာပေမဲ့အခုတော့ငါဟာအစွန်းရောက်ပစ္စည်းတွေထဲကို ၀ င်လာပြီ။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအခြေခံအဆင့်များကိုကျွန်ုပ်အားရှင်းပြနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်အနားယူနိုင်ပြီးယုံကြည်မှုလည်းရှိစေရန်ကျွန်ုပ်ဤသို့မေးရမည်။ ငါ့အတွက်ထာဝရပျက်စီးမှုရှိလား။ ငါကနုတ်ထွက်စာပေကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွလာတဲ့အခါငါ့ရဲ့ခြေလက်တွေဆက်နေ ဦး မှာလား။ ဒါမှမဟုတ်ငါ ED ပြissuesနာများရှိပါသလား။
သိပ္ပံကသူ့မေးခွန်းများ၏အဖြေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသို့မဟုတ်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပေ။ ပထမဦးစွာသူကိုစမ်းသပ်ဖို့သင့်တော်အသက် porn အပျိုကညာကိုရှာဖွေနိုင်သလဲ ဒုတိယအနေသူကိုတမင်တကာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ superstimulating, ထစ်အငေါ့ခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုလေးတွေဖော်ထုတ်လိုလား, သို့မဟုတ်ပါကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲဘယ်လို?
ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အလွန်အကျွံအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းက ပို၍ စွဲမက်စရာများဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုကြာမြင့်စွာကတည်းကသိရှိခဲ့ရသည်။ ယခုသုတေသနကမူးယစ်ဆေးမဟုတ်သော“ သဘာဝ” အရာများသည်အမှိုက်ပုံးကဲ့သို့သော ဦး နှောက်၏အာရုံကြောဓာတုဗေဒဟန်ချက်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြနေသည်။numbing တုံ့ပြန်မှု ပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှုရန်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများကသူတို့၏ ဦး နှောက်သည်ဤအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်ဟုဖော်ပြသည်။ (ဖြည်းဖြည်းချင်းနှစ် ဦး စလုံး porn ရဲ့ အန္တရာယ်များ နှင့် အကျိုးခံစားခွင့် နောက်ကွယ်မှကထွက်ခွာရာမှထင်ရှားဖြစ်လာကြပြီ။ )
ယောက်ျားတစ်ယောက်အပျိုဖော်ဝင်စကတည်းကညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း, သို့မဟုတ်မတိုင်မီပြီဆိုရင်, သူ့အလားအလာချစ်သူတွေမှတုန့်ပြန် (မရှိခြင်း၏) ပါလျှင်သူဘယ်လိုသိပါလိမ့်မယ်, သူ့ kinky အရသာစသောသူ၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမတရားသောကိုသူ့အဘို့ပုံမှန်ရှိပါသလဲ သူကနှိုင်းယှဉ်ဖို့ရာနှင့်အတူဘာမျှရှိပါတယ်။ Sexologist Jakob Pastötter porn အမြင်ပုံစံသွင်းသွင်းမည်သို့ဥပမာတစ်ခုပေးသည်:
Kinsey သည် ၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၌လေ့လာခဲ့စဉ်ကလိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများသည်စအိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမကြာခဏကျင့်သုံးလေ့မရှိခဲ့ပါ။ ပထမအပြောင်းအလဲများသည် ၇၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းလိင်တူချစ်သူများမြင်ကွင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်လိင်ကွဲလိင်အသိုင်းအဝိုင်းများ၌အထူးသဖြင့် gonzo pornography ဟုခေါ်သောလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရုတ်တရက်, စအိုလိင်အတော်လေးဘုံအလေ့အကျင့်ဖြစ်လာကြပုံရသည်။ ထိုနည်းတူစွာလိင်အကြံပေးသူများကတင်ပြသည်မှာမကြာမီကပထမဆုံးယောက်ျားလေးများက“ ငါ့ကောင်မလေးအားစအိုလိင်ဆက်ဆံရန်ငါမည်သို့သွေးဆောင်နိုင်မည်နည်း” ဟုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပထမဆုံးမိန်းကလေးများက“ ငါ့ရည်းစားကိုစအိုမှလိင်ဆက်ဆံဖို့ငါဘယ်လိုဖျောင်းဖျရမလဲ။ ” ယခုမိန်းကလေးများသည်လိင်အကြံပေးသူများအား“ ငရဲလိုနာကျင်အောင်မလုပ်နိုင်အောင်ငါဘာဆေးသောက်ရမလဲ” ဟုမေးလာသည်။ ဤအရာအားလုံးကို (၁၅) နှစ်တာကာလအတွင်းစတင်ခဲ့ပြီး၊ စအိုသည်လိင်မှုကိစ္စကိုညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများတွင်သာမန်လိင်အမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ်စတင်မိတ်ဆက်သောအခါ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်။
ဖြောင့်လေးတွေပေါ်ချိတ်ဆက်ဖြစ်လာဘို့ယနေ့တွင်ထိုသို့ကြားဖူးမဟုတ်ပါဘူး တယောက် porn, autoerotic အသက်ရှူကျပ်, ကျွန်ခံသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မုဒိမ်းကျင့်မှု porn ။ သူတို့ Self-image ကိုနှင့်ပဋိပက္ခဖြစ်နေပစ္စည်းမှစိုက်ထူ / orgasm ရှိခြင်းခံရဖို့အတှကျဒါဟာအလွန် unnerving နိုင်ပါတယ်။
မိဘတစ် ဦး ဘာလုပ်ရမလဲ
သင့်ကလေးသည်သူ၏ညစ်ညမ်းမှုသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်ဖွယ်လက္ခဏာများကိုသင်နှင့်ဆွေးနွေးမည်လား။ အကယ်၍ သူသာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံဟာအတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်эротကာများထက်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ အန္တရာယ်များကြောင်းသင်ရှင်းပြနိုင်မည်လား။ လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များပေးနိုင်ပါသလား။ မိဘအများစုသည်လက်ချောင်းများကိုဖြတ်ပြီးသူတို့အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သည်ကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုသတိပေးကြသည် Playboy, သူတို့ရဲ့ကလေးတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့အမှုအရာတို့ကိုထုတ်တွက်ဆပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
သို့သျောလညျးဒီနေ့ရဲ့ porn ကဲ့သို့အချည်းနှီးဖြစ်၏ Playboy။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူသည်မိမိကိုယ်ကိုအခန်းကဏ္ in တစ်ခုတွင်မိမိကိုယ်ကိုအလွယ်တကူမြင်ယောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းအသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမည်မျှကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ အထွတ်အထိပ်ပြီးနောက်၌ပင်အသုံးပြုသူသည်ထိတ်လန့်စရာကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဆက်သွားနိုင်သည်။ ပြmastနာကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမဟုတ်ပါသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာသည်“ ကောင်းသည်”၊ ပြpornနာကအင်တာနက် porn ရဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်အကြီးအကျယ်နှိုးဆွပေးသောသက်ရောက်မှုများဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကြောင့် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် flukeကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မနီးပါးငါးနှစ် porn အသုံးပြုသူများကိုပြန်လည်ထူထောင်များ၏ဒုက္ခများကိုနားထောင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ထဲကပိုပိုပြီးသူတို့ရဲ့နှစ်ဆယ်ကျော်သို့မဟုတ်ပင်အငယ်အတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အတော်လေးသူတို့ရဲ့မလိုချင်တဲ့လက္ခဏာတွေများ၏ဇွဲနေဖြင့်အုတ်အုတ်သဲသဲ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ပုံမှန်တုန့်ပြန် restore လုပ်ဖို့ခဲ့ကြပုံကိုရှင်းလင်းရှင်းလင်းချက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ (အသေးစိတ်အဘို့, ခရီးစဉ်ကို Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်။)
ဒီနေ့ရဲ့အလွန်လှပတဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာသူတို့ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းနိုင်အောင်ကလေးတွေကိုဘာပြောရမယ်ဆိုတာသိဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့်၊ ငါတို့ကြားခဲ့တဲ့ပုံပြင်တွေကိုအခြေခံပြီး၊ ဤနေရာတွင်အချို့သောအကြံပြုချက်များဖြစ်ကြသည်။ သင်ကသူတို့ကိုအကူအညီဖြစ်စေ၊ မရှာသည်ဖြစ်စေယနေ့ porn အကြောင်းသင့်ကလေးနှင့်ဆွေးနွေးရန်နည်းလမ်းရှာပါ။
1. ခြိမ်းခြောက်မှု, အရှက်ကွဲရှောင်ကြဉ်ပါ။ အန္တရာယ်ရှိသောလှုပ်ရှားမှုများသည် adrenaline နှင့် dopamine အပိုများကို ဦး နှောက်ထဲသို့ထုတ်လွှတ်သဖြင့်ဝိရောဓိအရ ပို၍ တန်ဖိုးရှိသောအရာများအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ (ဦး နှောက်၏ထူးခြားသောဆုလာဘ်အစီအစဉ်သည်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်၍ ထုတ်လွှတ်သည့်အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများအပေါ် အခြေခံ၍ တန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်သည်။ ) ထို့ကြောင့်နောင်တွင်အပြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အပြစ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးခြင်းနှင့်သတိပေးခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသော ဦး နှောက်ကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုတိုးပွားစေပြီး၊ sexy ပုံများကိုဆွဲဆောင်ခြင်းခံရသူတစ် ဦး သည်သူ၏ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်ရှာဖွေနေသည်ကိုသတိရပါ။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်သူ၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုဆိုးရွားလေလေစိုးရိမ်စိတ်ကိုတားဆီးရန်၎င်း၏ယာယီ ဦး နှောက်နှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာမေ့မေ့လျော့လျော့ကိုရှာဖွေလေလေဖြစ်သည်။
2 ။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့အကောင်းဆုံးစိတ်ဓါတ်များဆေးဝါးမဟုတ်ပါ။ အထွတ်အထိပ်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမှယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကမ်းလှမ်းသောကြောင့်, အာရုံနှင့်အိပ်မပျော်မရှိခြင်းကြောင့်ရောဂါပျောက်ကင်းနဲ့တူပုံရသည်။ ကလေးများအလွယ်တကူစိတ်ဓါတ်များကိုထိန်းညှိဖို့ masturbating များ၏အလေ့အထအတွက်ရနိုင်။ ကံမကောင်းစွာပဲလွန်းမကြာခဏအထွတ်အထိပ်လုပ်နိုင်တဲ့ တင်းမာမှုပိုမိုဆိုးရွားစေ အောက်ပါရက်ပေါင်းကျော်။ ကလေးတွေကစိတ်ကိုထိန်းညှိဖို့တခြားနည်းလမ်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း, အခြားသူများနှင့်အတူဖော်ရွေအပြန်အလှန်, ယုံကြည်စိတ်ချရအဖော်, သဘောသဘာဝအတွက်အချိန်, ချစ်ခင်ထိတွေ့မှု / ပွေ့ဖက်, ဖန်တီးမှုတစ်ခုခုလုပ်နေတာ, သီချင်းဆိုခြင်း, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူအချိန်, ဘာဝနာများနှင့်အခြားသူများအားဝန်ဆောင်မှုအားလုံးစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် mood- ထိန်းညှိကူညီပြသပြီ ဖြစ်ကောင်းသူတို့ဦးနှောက်ချိန်ခွင်လျှာတိုးတက်စေလို့ပဲ။ (တစျခုအဖေကိုသူ့အဘို့ရှေးဟောင်း technique ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးခွငျးအားဖွငျ့မိမိအညစ်ညမ်းချိတ်ဆယ်ကျော်သက်ကကူညီပေးခဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင် redistributing လာသောအခါရမ္မက်သည်ထ။ )
3. အဆိုပါတင်းမာမှုပြဿနာကိုနားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်နှိုးဆွမှုနှင့်နှိုးဆွမှုရစေသောလိင်အင်္ဂါများအတွက်ချိန်ကိုက်သည်ဟုထောက်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လှုံ့ဆော်မှုများ (ယနေ့စူပါညစ်ညမ်းမှုသို့မဟုတ်လိင်ကစားစရာများ) ကိုတံခါးခေါက်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုသိမ်မွေ့။ သာမန်လှုံ့ဆော်မှုများအပေါ်ယာယီအားနည်းမှုလျော့နည်းစေသည်။ အင်တာနက်ကနေညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖယ်ရှားပေးနိုင်သော်လည်းအင်တာနက်မှအပြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်အသုံးပြုသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ သူတို့ကိုလောင်စေတယ်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်ပြည့်စုံမှုကိုရရှိရန်ပိုမိုခက်ခဲစေနိုင်သည်၊ ပို၍ ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပိုမိုအားကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
4. ချိန်ခွင်ကိုရှာပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်တွန်းအားသည်သာမန်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါ။ ၎င်းသည်အခြားနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသောဆက်သွယ်မှုကိုမျိုးရိုးဗီဇတောင့်တခြင်းမှဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုကဤပင်ကိုတိုက်တွန်းချက်ကိုပိုမိုတောင်းဆိုလာနိုင်ကြောင်းကလေးများနားလည်သဘောပေါက်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်အရှိန်လျှော့ချရန်နည်းလမ်းများကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်။ ဝိရောဓိအနေဖြင့်၊ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုသူတို့တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ဤအယူအဆသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာဖြစ်ပုံရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏မုဆိုးစုဆောင်းသူဖြစ်နိုင်သည် ဘိုးဘေးတို့ဝေး masturbated နည်းသော ငါတို့ထက်, အမှန်တကယ်လျော့နည်း horny ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကဒီနေ့ရဲ့ဖန်တီးမှုအားဖြင့်အလွန်အကျွံသွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုကိုကျော်လွှားဖို့မလိုပါဘူး။ သူတို့ရွေးချယ်ထားသည့်အချိန်ဇယားအတိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်မစုံလင်သော်လည်းကလေးများအတွက်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမပဲ့ပြင်သည့်အသုံး ၀ င်သည့်ဘဝကျွမ်းကျင်မှုလည်းဖြစ်သည်။
5 ။ သဘာဝကလှုံ့ဆော်မှုမှကပ်ထားပါ။ “ ပိုနည်းနိုင်သည်” ၏အကြံပြုချက်အရတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တကယ့်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်လက်တွေ့ကျသောချစ်ခင်ဖွယ်လိင်ဆက်ဆံမှုကို အခြေခံ၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အနည်းဆုံးပြaticနာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောပါ။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကသူတို့ကိုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်အောင်မပို့နိုင်လျှင်၊ သူတို့၏ ဦး နှောက်သည်ယခင်အထွတ်အထိပ် မှစ၍ အထိခိုက်မခံနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရေရှည်တွင်အလုပ်ပြီးမြောက်ရန်ယနေ့ porn (သို့မဟုတ် porn flashbacks) သို့ပြောင်းခြင်းထက်စောင့်နေခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
6 ။ porn လက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီနေ့ porn ဟာ non-alpha ယောက်ျားလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ် ဦး စားပေးမှုကိုသံသယဖြစ်စေတယ်၊ မိတ်ဖက်တစ် ဦး ၏စိတ်ကျေနပ်မှုသည်ကြီးမားသော၊ မပြိုကွဲဘဲစိုက်ထူထားသည့်သို့မဟုတ်ကြယ်တစ်လုံး၏အခြားသွင်ပြင်လက္ခဏာများအပေါ်တွင်မမူတည်ကြောင်းထောက်ပြပါ။ ယောက်ျား၏အပျော်အပါးသည်ဆံပင်မရှိသည့်လိင်အင်္ဂါများ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ရင်သားကင်ဆာ implants များအပေါ်မှီခိုခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းသောသရုပ်ဆောင်များကိုလတ်တလောစိတ်ကျေနပ်မှုရစေမည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုဖန်တီးရန်အထူးပြုသည့်လိင်အားကစားသမားများဖြစ်သည်ဟုရှင်းပြပါ - ရေရှည်တည်တံ့သောစိတ်ကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်အပျော်အပါးကိုပင်ခံစားရခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ကလေးအတွက်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်စိတ်ကူးပုံဖော်ပါ။
ကလေးတွေကဒီရက်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အသက်တကျိပ်တပါးသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းတွေ့မြင်, ဒါမှမဟုတ်ပင်အငယ်။ သင်သည်သင်၏ကလေးသည်နှင့်အတူညစ်ညမ်းဆွေးနွေးမှုဖွင့်ရန်ကောင်းသောလမ်းမစဉ်းစားနိုင်လျှင်, သင်သည်ဤအခြို့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပေမည် အခမဲ့ဗီဒီယိုများ အမျိုးမျိုးသောရင်းမြစ်များမှ။ သင်၏အိမ်ကွန်ပျူတာများ (နှင့်သင့်ကလေး၏ဆဲလ်ဖုန်း) ကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ရန်သင်ပိုမိုခက်ခဲစေနိုင်သည် အခမဲ့ porn blockers.
သုတေသနတစ်ဦးခိုင်, ထောက်ခံမိဘကြားဆက်ဆံရေးကွောငျးဖျောပွသ ကလေးတွေအကာအကွယ်ပေးနိုင် ပင်မျိုးရိုးဗီဇအားနည်းချက်နေသောသူတို့ကိုအတွက်အန္တရာယ်များအပြုအမူဆန့်ကျင်။ မေးခွန်းများကိုမေးရန်သင့်ကလေးကိုအားပေးပါ။ နောက်ဆုံးမှာသူ / သူမသူ / သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုလက်ခံပါ။ သငျသညျလုပျနိုငျအားလုံးအစိုင်အခဲသတင်းအချက်အလက်, သင့်မေတ္တာရှင်ထောက်ခံမှုနှင့်ကျန်းမာဥပမာပူဇော်သည်။ ဒါကသင့်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာအဘို့အခုတ်မောင်းရန်လိုအပ်ပါသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီ post ကိုရေးပြီးကတည်းကစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာပါပြီ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသောယောက်ျားများသည်၎င်းတို့၏ erectile ကျန်းမာရေးကိုပြန်လည်ရရှိရန်မကြာခဏလိုအပ်သည်။ Porn သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ Mojo ကိုပြန်လည်ရယူရန်ပိုမိုလိုအပ်သည်။
စိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးထိခိုက် porn အသုံးပြုမှု? လေ့လာမှု ၅၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ကျော်၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး 200 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများဒါမှမဟုတ်သုတေသန၏ဤ 2012 ပြန်လည်သုံးသပ် - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2012)။ နိဂုံးမှ:
မြီးကောင်ပေါက်များကအင်တာနက်ကိုတိုးမြှင့်ရရှိမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး, သင်ကြားရေးနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့အတွက်မကြုံစဖူးအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးထားသည်။ ပြောင်းပြန်စာပေများတွင်ထင်ရှားကြောင်းအန္တရာယ်များ၏အန္တရာယ်သည်ဤဆက်ဆံရေး elucidate ဖို့အားထုတ်မှုရှိအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှဆယ်ကျော်သက်ထိတွေ့မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သုတေသီများဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများအကြံပြု ညစ်ညမ်းလောင်သူလူငယ်လက်တွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးများနှင့်ယုံကြည်ချက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ တွေ့ရှိချက်များထဲတွင်အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ၏အဆင့်မြင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်, အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ညစ်ညမ်းပိုပြီးမကြာခဏစားသုံးမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းပြီ ... ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏တိုးချဲ့ဒီဂရီနှင့်အတူအကြမ်းဖက်မှုကိုသရုပ်ဖော်ကြောင်းညစ်ညမ်း၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ အဆိုပါစာပေညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် Self-အယူအဆ၏မြီးကောင်ပေါက် '' အသုံးပြုမှုအကြားအချို့ဆက်စပ်မှုညွှန်ပြပါဘူး။ ယောက်ျားလေးများသူတို့အဖြစ် virile သို့မဟုတ်ဤမီဒီယာအတွက်ယောက်ျားအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါကိုကွောကျရှံ့နေချိန်တွင်မိန်းကလေးများ, သူတို့ကညစ်ညမ်းပစ္စည်းအတွက်ရှုမြင်မိန်းမများမှကိုယ်ထိလက်ရောက်ယုတ်ညံ့ခံစားသတင်းပို့ပါ။ မြီးကောင်ပေါက်လည်းညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုသည်၎င်းတို့၏ Self-ယုံကြည်မှုနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတိုးအဖြစ်လျော့နည်းသွားကြောင်းသတင်းပို့သည်။ ထို့အပြင်သုတေသန, အင်တာနက်ပေါ်ရှိတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအမြီးကောင်ပေါက်, လူမှုရေးပေါင်းစည်းမှု၏အနိမ့်ဒီဂရီရှိသည်အကြံပြုအကငျြ့ပြဿနာများ, ဆိုးသွမ်းအပြုအမူများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုများတွင်တိုးနှင့်စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Bond လျော့နည်းသွားသည်။